Isbitaal buuxa ayaa xayiraad la geliyey, kaddib dadkii oo dhan waxaa ku wada dhacay coronavirus
Horraantii bishii Apriil, bukaanno ku sugnaa isbitaalka St Petersburg oo laga baaray cudurka taasoo keentay in isbitaalka iyo dadka ku jiraba karantiil la geliyo.
"Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay"
Aadan Barre Ducaale oo ka badbaaday "mooshin xilka looga qaadi rabay"
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka looga qaado.
Trump oo ku hanjabay inuu milatari u adeegsanayo soo afjaridda rabshadaha
Madaxweyne Trump xilliga uu aqalka cad warbaahinta kula hadlayey mudaharaad ka socday bannaanka kore ee aqalka cad ayey booliska ku kala eryeen sunta indhaha ka ilmeysiisa.
Toos Askari lagu toogtay Las Vegas, Maraykanka
Tabinta tooska ah ee maanta
Askari lagu toogtay Las Vegas, Maraykanka
Shaqaalaha Facebook oo ka carooday qoraal uu Trump soo dhigay boggiisa
Shaqaalaha Facebook waxay sheegeen iney 'ceeb dareemayaan' maadaamaa qoraalka muranka dhaliyey uu madaxweynaha Trump toddobaadkii hore soo dhigay boggiisa Facebook aan laga saarin.
Caro ka dhalatay wiil Falastiini ah oo ay toogteen booliska Israa'iil
Boqolaal qof ayaa ka soo qaybgalay aaska nin Falastiiniya oo xaalada Austismka qabay oo ay toogteen booliska.
60 il-biriqsi: Wararka maanta ee cudurka Korona
Bandowgii lagu soo rogay magaalooyiinka Mareykanka oo joojin la'a dibadbaxayaasha
Bandowgii lagu soo rogay qaar ka mid ah magaalooyiinka Mareykanka ayaa waxaa uu hor istaagi waayay dibadbaxayaasha ka careysan geeridii ninkii madowga ahaa George Floyd,.
Waxaa wali socda baaritaanada dilkii loo geystay 8 qof oo 7 ka mid ah ay ahaayeen shaqaala caafimaad oo lagu dilay tuulada Galoley ee Shabeellaha dhexe.
Maxaa ka jira in toonta ay dawo u tahay fayraska Korona